Inweta Blog gi na “A-List” | Martech Zone
Odi mma, ugbua ka m nwetara gi ebe a, ara ghara iwe iwe ma lawa. Gee ntị n’ihe m na-agwa gị.
Enwere ire ọkụ gafere blogosphere ugbu a na ntinye akwụkwọ nke Nicholas Carr, Nnukwu akwukwo. Chebe Israel dị na esemokwu ahụ, dị ka ụda nke ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ (atụ).
Ikwesiri iguta ebe Mr. Carr juputara n’ihu tupu iguta ihe m kwesiri ikwu. Enwere m olileanya na m na-ekwupụta ozi ya n'ụzọ ziri ezi… Echere m na ihe ọ na-ekwu bụ na enwere ole na ole "A-List" ndị na-ede blọgụ na onye ọ bụla ọzọ kwesịrị ịtụfu uwe ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iru na “A-List” nke blogosphere, ị ga-ebu ụzọ chọpụta ihe ndepụta a bụ. Ọ dịịrị gị… ọ bụghị Nick Carr, ọ bụghị Technorati, ọ bụghị Google, ọ bụghị Yahoo!, Abụghị Typepad ma ọ bụ WordPress. “A-List” adịghị ekpebisi ike site na ọnụọgụ hits ị nwetara, olu nke peeji peeji, onyinye ị natara ma ọ bụ ego dollar na akaụntụ adsense gị. Ọ bụrụ na ọ bụ, ị nwere ike ịde blọgụ maka ebumnuche na-ezighi ezi.
Nabata na Douglaskarr.com, otu n'ime Nnukwu Akwụkwọ. (Ọ dị mma, ma eleghị anya ọ bụghị nnukwu)
Na esemokwu bụ 'ụlọ akwụkwọ ochie' nke mgbasa ozi mgbasa ozi. Iwu ahụ kwuru na ka eyeballs na-ahụ mgbasa ozi gị, ọ ka mma. Lọ akwụkwọ ochie ahụ kwuru ma ọ bụrụ na ị na-enweta ọtụtụ narị puku akwụkwọ akụkọ, ị ga-enwe ihe ịga nke ọma. Otu di na nwunye na narị na ị ga-abụ ọdịda. I bu akuku nke Nnukwu akwukwo. Ọ bụ kpọmkwem otu echiche ahụ nke na-adọkpụ ụlọ ọrụ ihe nkiri nkiri, ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ na Network Television. Nsogbu bụ na ị na-akwụ nnukwu ego maka bọọlụ anya ndị ahụ, na-enweghị nloghachi. Ihe bụ nsogbu bụ na ịchọghị nku anya ndị ahụ niile, ọ dị mkpa ka ị nweta mgbasa ozi gị na nku anya aka nri.
My "A-List" adabaghị nke Seth Godin, nke Tom Peter, nke Technorati, nke Shel Israel, ma ọ bụ nke Nick Carr. Achọghị m nde ndị na-agụ ya. O doro anya, enwere m obi ụtọ ka stats m na-eto. N'ezie m chọrọ itolite ọgụgụ na njide nke ndị na-agụ na blọgụ m. Mana m nwere mmasị naanị na ndị folks nwere otu nsogbu ahụ ma na-achọ otu ụzọ ahụ m dị.
Abụ m onye na-azụ ahịa-teknụzụ-geek-Christian-papa dude nke bi na Indiana. Agaghị m akwaga New York ma ọ bụ San Francisco. Anaghị m achọ ịba ọgaranya (mana agaghị eme mkpesa ma m mee ya!). Mụ na ndị otu na-azụ ahịa na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na Indianapolis na gburugburu. Ana m na-amụ ma na-ekpughere ndị m 'ịde blọgụ na ntanetị (di na nwunye iri na abụọ ma ọ bụ karịa!) M na-akọrọ ahụmịhe m, echiche m, ajụjụ m, na ozi m nye ọtụtụ ndị nwere mmasị.
See hụrụ, mgbe m ga-esi a kwuru si Shel Israel, Tom Morris, Pat Coyle, ezinụlọ m, ndị enyi, ma ọ bụ ndị ọzọ folks na m na-asọpụrụ ma na-eso… M ugbua mere ka ọ na “A-List”. Ọ bụrụ na nke ahụ abụghị echiche gị maka “A-List”, ọ dị mma. Ikekwe achọghị m ịnọ na nke gị. Onye ọ bụla n’ime anyị na-ahụ ihe ịga nke ọma n’ụzọ dị iche.
Otu n’ime Nnukwu agụ
Ọgọstụ 17, 2006 na 10:09 ehihie
echere m na i kwuru ya nke oma. ndị mmadụ kwesịrị ịtụ ihe mgbaru ọsọ n'ebe ahụ na-atụ anya ya. ozugbo ha ruru nke ahụ, gawa n'ihe ịma aka ọzọ.
Ọgọstụ 17, 2006 na 10:40 ehihie
Ụzọ ịga - kwenye kpamkpam.
Azụlitere m echiche ole na ole banyere nkata A-lister a n'onwe m.
Nnukwu ekele na "quasi-marketing-technology-geek-Christian-nna dude" bit, btw. Enwere m ike ịkọwa onwe m otu ụzọ ahụ!
Ezigbo nkọwa na grwat post. M ga-ejikọta. Daalụ
Chetakwa na Jizọs kwusara ọtụtụ puku mmadụ ozi ọma, ma ọ zụụrụ naanị 12. Ndị mmadụ iri na abụọ ahụ kwesịrị ntụkwasị obi. Leekwa ebe ọ gara!!